Aria: ampio fiasa mahafinaritra amin'ny app Music (Cydia) | Vaovao IPhone
Aria: ampio fiasa mahafinaritra amin'ny app Music (Cydia)
Omaly dia niresaka taminao izahay momba ny fomba hahagagaan'ny Spotify amin'ny fampiharana azy amin'ny fanavaozana ny App Store amin'ny ho avy ary ny tombony sy fatiantoka rehetra mety hitranga raha toa ka mampifanaraka ny rindranasa amin'ny iDevices ilay fitaovana; Androany, tsy hiresaka momba Spotify isika fa momba ny fampiharana Music natiora ary nisy tweak vaovao avy any Cydia niantso Aria. Manampy ity tweak ity Fampiasana tena mahaliana toy ny mety hanampiana hira harahina rehefa tapitra ilay henontsika. Raha te hahafantatra ireo fiasa vaovao rehetra ampiharin'i Aria ianao amin'ny fampiharana iOS 7 "Mozika" ofisialy dia mamakia foana.
Fampisehoana vaovao maro ao amin'ny rindrambaiko Music miaraka amin'ny tweak Aria
Nandeha tany Cydia indray izahay ary nitady ilay fika noresahina androany: «Aria«, Hita ao amin'ny repo ofisialin'ny BigBoss amin'ny vidiny $ 1.99. Ilaina ny famerenanana mba hahafahan'ny Cydia manamboatra araka ny tokony ho izy ny toe-javatra voalohany aria.
Ao amin'ny fikirakiran'ny fitaovantsika no ahitantsika safidy mahaliana maromaro azontsika atao ny manamboatra:
Loko Tint: Raha atao default dia manana ny loko magenta ho toy ny loko fototra ny fampiharana «Music» fa miaraka amin'i Aria dia azontsika atao ny manova io loko io amin'ny loko rehetra tadiavintsika. Raha ny amiko dia nisafidy ny loko mainty aho.
Zoom Animation: Ao anatin'ny safidy "Grid Views" no ahitantsika an'io safidy io, izay mahatonga antsika rehefa manindry ny fonony rakikira isika dia mamorona sary mihetsika zoom.
Jery ​​maizina & manjavozavo: Raha tadiavintsika fa rehefa mampiditra "Ankehitriny milalao" isika dia misy vokany manjavozavo dia tokony hahetsika io safidy io.
Kitiho / avereno sary ny bokotra: torak'izany ihany koa, raha te hanana ny bokotra "avereno" sy "kisendrasendra" isika eo amin'ny efijery "milalao ankehitriny" dia tsy maintsy ampodintsika io safidy io amin'ity fotoana ity.
Hatsarao ny fomba fijerinao tononkira: Raha atao banga, isaky ny eo amin'ny efijery "Milalao isika" dia ho hitantsika ny tononkiran'ny hira alefa raha manana azy ireo ao anatin'ny fikirakirana iTunes isika.
Saingy, apetrakao ny toerana rehetra apetraky ny fampiharana «Mozika» izay ahafahantsika manamboatra Aria, ndao hojerentsika ny tena fiasan'ny tweak ao anatin'ny fampiharana. Mahazo miditra amin'ireo hira isika ary raha mitazona hira mandritra ny segondra vitsy dia safidy telo no hiseho:
Milalao ny toerana farany
Milalao avy eo
Miankina amin'ny safidy inona no namboarinao ho an'i Arias ao amin'ilay "setting" amin'ilay tweak, Hiseho ny fanavaozana ny endrika «bebe kokoa» ny fampiharana «Mozika».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » Aria: ampio fiasa mahafinaritra amin'ny app Music (Cydia)
Tony dia hoy izy:
Satria misy spotify ny app mozika very ny fahalianako rehetra tamim-pahatsorana xD manana izany aho eo an-joron'ny folder very eo amin'ny ipad ...
Valiny amin'ny calismar
Roku dia manatsara ny interface ao amin'ny iOS fitaovana